Tray trano fivarotana - Delta Engineering Belzika
Takelaka fisaka sy lovia fisaka
Azonao atao ny manome sakafo anaty takelaka fisaka na lovia feno iray, izay ampidinin'ilay mpampita sakafo any ivelany ao anaty palletizer tsirairay. Manana trano fanatobiana entana iray. Rafitra fanoherana ny rafitra miorina amin'ny rafitra anti-sticking.
Published in Tranon-tsambo
Alatsinainy, 03 Aogositra 2020 by Sara
Takelaka fisaka, fitoeram-bokatra ary toerana ambony
Azonao atao ny manome sakafo amin'ny takelaka fisaka feno, lovia na zana-kazo ambony, izay ampidinin'ilay mpampita sakafo any ivelany ao anaty palletizer tsirairay. Manana trano fanatobiana entana roa. Rafitra fanoherana ny rafitra miorina amin'ny rafitra anti-sticking.
Trano fitehirizan-tsaka kely sy tsotra
Trano fitahirizam-pako izay afaka mitahiry hatramin'ny 10 trays na frame ambony (haavon'ny lovia ambony hatramin'ny 160 mm)
Trano fitahirizana feno haavo feno
Trano fitahirizam-pako izay afaka mitahiry hatramin'ny 24 trays na frame ambony (haavon'ny lovia ambony hatramin'ny 130 mm)